ညီနေမင်း: audio အတွက် စိတ်မပျက်နဲ့ .
တေဇာ: ကူညီပါဦးကိုညီရေ... window အသစ်တင်လိုက်တာ အသံမထွက်ဘူး ........ ဘာမှမကြား ရတော့ဘူးခင်ဗျာ ...
ညီညီအတွက်ကိုလဲ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ virus ကြောင့် window တင်ပြီးခါကျမှ audio driver မရှိသူများအတွက် ရည်စူးပါတယ် . အခုတင်ပေးတဲ့ program ကတော့ ဘယ် audio device ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ် . အသံမထွက်သူများ ထွက်ကိုထွက်လာရပါစေမည် . အာမခံပေးပါတယ် . ပြန်အမ်းတွေတော့ အစကတည်းက လက်မခံထားလို့ . ပိုက်ဆံတော့ ပြန်မအမ်းတော့ပါဘူး . လုပ်နည်း (၂) နည်းတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ..
Download rapidshare ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire
Posted by ညီနေမင်း at 12:52 AM
sawlinux September 17, 2009 at 4:57 AM
ဒီပို့စ်ဟာ ဒရိုက်ဗာမရှိတဲ့ကွန်ပျူတာအတွက် သိပ်အထောက်အကူပေးတယ်။ ယူထားလိုက်ပြီး ငါ့ညီရေ
ကောင်းကင် September 19, 2009 at 9:00 AM
အလားတူ windows အသစ်တင်လို့ မရနိုင်တဲ့ network controller နှင့် video controller တွေ အဆင်ပြေအောင် သုံးလို့ရတဲ့ software လေးရှိနိုင်သလားခင်ဗျာ့... ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ fujitsu FMV BIBLO NF/D70 က Eng: version ပြောင်း windows အသစ်တင်လိုက်တာ controller တွေ မရတော့လို့ နည်းလမ်းလေး ညွှန်ပေးပါအုံးဗျာ
ကောင်းကင် September 19, 2009 at 9:06 AM
nyi nyi October 25, 2009 at 8:23 AM
driver checker cann't install because error found that dcdriver.dll file not found. can u tell me what can i do for that problem. ko nyi nay min please :(
i am nyi nyi from japan.
van sui nei November 28, 2009 at 12:26 AM
ကိုညီရေကျွန်တော့် PC ကဝင်းဒိုးအသစ်တင်ပြီးအခုအသံမလာတော့ဘူး ear phone မှာတော့ရတယ်. အကိုတင်ထားတဲ့ post နှစ်ခုလုံးလဲဒေါင်းပြီးပြီး RUN လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်.window vista update တွေလဲအကုန်လုပ်ထားပါတယ်. ဘာဆတ်လုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါအုံး